पुरानाे दम खोकीः खानपिन, रोकथामदेखि उपचारसम्म - लोकसंवाद
गाउँघरका बिरामीहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा उपचार गराउन सजिलो पर्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले पुरानो दम खोकी पत्ता लगाउन यो रोगसम्बन्धी जानकारी राख्नु आवश्यक पर्छ । दम खोकीसम्बन्धी प्रश्नहरू सोधेर यो रोगको निदान गर्न सकिन्छ । हेल्थ सेन्टरमा पुरानो दम खोकीबाट पीडित रोगीहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूको रोगको रोकथाम गर्ने उपायहरू सिकाउन सकिन्छ । दम खोकीबाट पीडित बिरामीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपचार पनि गर्न सक्छन् । दम खोकीका बिरामीहरूको तथ्यांक संकलनले उचारमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको बन्दोबस्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
दम खोकीलाई कसरी रोकथाम गर्ने ?
दम खोकी हुन नदिन धुवाँ, धुलो र चिसोबाट बच्नुपर्छ । कुनै किसिमको धुम्रपान गर्नुहुँदैन । धुम्रपानको लत लागिसकेकाहरूले यो लतलाई त्याग्नुपर्छ । चुरोट, बिँडी, हुक्का, सुल्पा अथवा सिगार खानेहरूले यो लत छाड्नाले दम खोकी कम हुन्छ । धुम्रपानको साथै घरभित्र दाउरा बालेर खान पकाउँदा निस्कने धुवाँ पनि स्वास्थ्यको लागि त्यतिकै हानिकारक हुन्छ । घरभित्र खाना पकाउँदा धुवाँ नआउने चुह्लो राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । धुम्रपान नगर्ने तर धुम्रपान गर्नेहरूको छेउछाउमा बस्नेहरूलाई पनि धुम्रपानको धुवाँले प्रभाव पार्छ ।
दम खोकी भएकाले कस्तो खाना खानुपर्छ ?
दम खोकीका बिरामीहरूले कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, भिटामिन र धातुयुक्त पौष्टिक खाना खानुपर्छ । दम खोकीका बिरामीहरूले दिनमा ४–५ पल्ट आवश्यक खाना खानु राम्रो हो । दिनैपिच्छे प्रोटिन खानाले सास फेर्न मद्दत गर्ने तथा छातीका मांशपेसीहरू शक्तिशाली हुन्छन् । माछा–मासु र दूधमा प्रोटिन हुन्छ । तौल कम भएकाहरूले चिल्लो पदार्थ खानाले तौल बढ्छ । चिल्लो पदार्थबाट कार्बनडाइअक्साइड पनि बढ्दैन तर कार्बोहाइड्रेटबाट कार्बनडाइअक्साइड ज्यादा बढ्छ । रगतमा कार्बाेहाइड्रेट ज्यादा हुनु दम खोकी भएकाहरूलाई राम्रो हुँदैन ।
ठीक मात्रामा गहुँको रोटीबाट आउने कार्बोहाइड्रेट खानु बुद्धिमानी हुन्छ । ताजा फलफूल, सागसब्जी र फाइवरयुक्त खाना दम खोकी हुनेहरूले खाँदा फाइदा हुन्छ । झोल पदार्थ खानापछि खानुपर्छ । खानासँगै धेरै पानी खानाले पेट भरिन्छ र दम पनि गराउन सक्छ ।
धेरै कमजोर भएका बिरामीहरूले औषधि कम्पनीहरूले बनाएका प्रोटिन प्रयोग गर्न सक्छन् । दम खोकीका बिरामीहरूको बी.एम.आई. २१ भन्दा ज्यादा भएको राम्रो मानिन्छ । धेरै मोटोपन भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । हाम्रो बी.एम.आई २३ भन्दा कम नै भएको राम्रो हो । आफ्नो तौल हुनुपर्नेजति भएमा खाइरहेको खानाको मात्रा ठीक ठान्नुपर्छ । तौल ज्यादा भएर बी.एम.आई. बढेको अवस्थामा भने ५०० क्यालोरी बराबरको खाना कम गराउनुपर्छ । ३५ सय क्यालोरी बराबर एक पाउण्ड हुन्छ । अर्थात् दिनहुँ ५०० क्यालोरी कम गराउँदा हप्तामा एक पाउण्ड तौल कम हुन्छ । कम तौल भएका व्यक्तिहरूले दिनमा ५०० क्यालोरी बढाउँदा एक हप्तामा एक पाउण्ड तौल बढ्छ ।
आवश्यक क्यालोरी पत्ता लगाउने तरिका
मानिसले सास फेर्दा, मुटु चल्दा र आन्द्रामा पाचन क्रिया हुँदा क्यालोरीको आवश्यकता पर्छ । यसलाई परिश्रम नगरेको अवस्थामा आवश्यक क्यालोरी अर्थात् ब्यासल मेटाबोलिक रेसियो’ भनिन्छ । ४.२ किलो जुस बराबर एक किलो क्यालोरी हुन्छ ।
साधारणतया पुरुषहरूलाई परिश्रम नगरेको अवस्थामा बी.एम.आर. १५ सय क्यालोरी र महिलाहरूलाई १२ सय क्यालोरी आवश्यक पर्छ । पुरुषहरूको यो क्यालोरीलाई पत्ता लगाउन किलोग्राममा लिएको तौललाई एक अंकले अनि २४ ले गुणा गर्नुपर्छ । महिलाहरूको यस्तो क्यालोरी पत्ता लगाउन ०.९ ले पहिले गुणा गरेर पछि फेरि २४ ले गुणा गर्नुपर्छ । सामान्य परिश्रम गर्ने पुरुषलाई २५ सय क्यालोरी र महिलालाई दुई हजार क्यालोरी भए हुन्छ । मानिसले गरेको परिश्रमअनुसार आवश्यक क्यालोरी थाहा पाउन सकिन्छ ।
हप्तामा १–३ दिनसम्म व्यायाम गर्नेहरूको आवश्यक क्यालोरी पत्ता लगाउन बी.एम.आर.लाई १.३७५ ले गुणा गरिन्छ । त्यस्तै, हप्तामा ३–५ दिनसम्म व्यायाम गर्नेहरूको आवश्यक क्यालोरी पत्ता लगाउन १.५५ ले गुणा गर्नुपर्छ । साधारणतया यसरी हिसाब गरेर निकालिएका क्यालोरीलाई नै आवश्यक क्यालोरी माने हुन्छ । कडा परिश्रम गर्नेमा १.८ र धेरै कडा परिश्रम गर्नेहरूमा २ ले गुणा गर्नुपर्छ ।
हाम्रो क्यालोरीको आवश्यकता हाम्रो शरीरमा हुने चिल्लो पदार्थको प्रतिशतले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । शरीरको बोसोको प्रतिशत बी.एम.आई.द्वारा निम्न सूत्रबाट पत्ता लाग्छ :
पुरुषको बोसोको प्रतिशत= १.२×बी.एम.आई.+०.२३×उमेर वर्षमा– १६.२
महिलाको बोसोको प्रतिशत= १.२×बी.एम.आई.+०.२३×उमेर वर्षमा– ५.४
शरीरको बोसोको प्रतिशतबाट आवश्यक क्यालोरी पत्ता लगाउन गुणा गर्ने अंक अर्थात् लिन फ्याक्टर मल्टिप्लायर पत्ता लाग्छ । यही अंकले बी.एम.आर.को क्यालोरीलाई गुणा गरेर दिन प्रति दिन शरीरलाई चाहिने क्यालोरीको जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
पुरुषमा बोसोको प्रतिशत गुणा गर्ने अंक
२८ भन्दा ज्यादा ०.८५
महिलामा बोसोको प्रतिशत गुणा गर्ने अंक
३८ भन्दा ज्यादा ०.८५
विशेषज्ञहरूले अन्य सूत्रहरूको प्रयोग गरेर हाम्रो शरीरको बोसोको प्रतिशत पत्ता लगाएका छन् । यहाँ उल्लेख गरेको तरिकाबाट शरीरको बोसोको प्रतिशत पत्ता लगाउन गाह्रो पर्दैन । यो तरिकाबाट पत्ता लगाइएको क्यालोरी वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित भएकाले सकभर यसलाई प्रयोग गर्दा सर्वमान्य हुनेछ । युवा–युवतीहरूमा ज्यादा क्यालोरी चाहिन्छ र यिनीहरूमा क्यालोरी पत्ता लगाउने सूत्र अलिक बेग्लै हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसार दिनभरमा चाहिने क्यालोरी थाहा पाउन सकिन्छ । हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा तौल हुनेहरूले दिनमा ५०० क्यालोरी बराबरको खाना कम गराउँदा हप्तामा एक पाउण्ड तौल घट्छ । कम तौल हुनेहरूले ५०० क्यालोरी बराबरको खाना ज्यादा खाँदा हप्तामा एक पाउण्ड तौल बढ्छ । आफ्नो तौल कम–वेसी भएको बी.एम.आई.द्वारा थाहा पाउन सकिन्छ । एसियाली मुलुकका वासीहरूको वाञ्छनीय बी.एम.आई. २३ भन्दा कम र १८.५ भन्दा ज्यादा मानिएको छ ।
सीओपीडीबाट बिरामीहरूलाई लगातार ८८ प्रतिशत र योभन्दा कम अक्सिजन स्याचुरेसन अथवा रगतको अक्सिजनको प्रेसर ५५ मिलिमिटर मर्करी र कार्बनडाइअक्साइड ५० मिलिमिटर मर्करी भएमा लामो अवधिसम्म घरमा अक्सिजन प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही परिश्रम गर्दा अथवा रातीको अक्सिजन स्याचुरेसन केही मात्रामा कम हुँदा अक्सिजनको आवश्यकता पर्दैन ।
पुरानो दम खोकीमा व्यायामको महत्त्व
दम खोकीबाट पीडित रोगीहरूको शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन्छ । यिनीहरूका मांशपेसीहरू कमजोर भएका हुन्छन् । छातीका मांशपेसीहरू कमजोर हुँदा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । शरीरका मांशपेसीलाई शक्तिशाली बनाउन अक्सिजन चाहिन्छ र व्यायामले यसलाई मद्दत गर्छ । यसर्थ नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । एक दिन बिराएर प्रत्येक दिन ३० मिनेट हिँड्नु सबभन्दा सजिलो र उपयुक्त व्यायाम मानिन्छ ।
ज्वरो आएको बेला र छाती दुखेको बेला व्यायाम गर्नुहुँदैन । नियमित व्यायामले दम खोकी लाग्ने मानिसहरूलाई फुर्तिलो बनाउँछ । लामो सास लिँदा फोक्सोभित्र अक्सिजन पस्छ र सास छाड्दा कार्बनडाइअक्साइड बाहिर निस्कन्छ । दुई सेकेण्डसम्म सास लिने र चार सेकेण्डसम्म सास छाड्ने गर्नुपर्छ । सास छाड्दा ओठलाई मुजा पारेर मुख सानो गर्नाले सास छाड्न सजिलो हुन्छ । फुकेर गर्ने फोक्सोको व्यायाम अर्थात् इन्सेन्टिभ स्पिरोमेट्रीले पनि फाइदा गर्छ । सास फेर्ने व्यायाम यसका विशेषज्ञबाट सिक्नाले पछि आफैँले गर्न सकिन्छ ।
पुरानो दम खोकीबाट पीडित पुरुष तथा महिलाहरूलाई जीवाणु, विषाणु र फङ्ग्सबाट संक्रमण हुने डर हुन्छ । दम खोकीका बिरामीहरूलाई निमोनिया हुनबाट बचाउन भ्याक्सिन दिन आवश्यक पर्छ । ६५ वर्षभन्दा ज्यादा उमेर भएका सीओपीडीका रोगीहरूलाई प्रेभिनार– १३ पहिलो पल्ट दिने अनि एक वर्षपछि न्यूमो भ्याक्सिन– २३ दिए पुग्छ । भाइरसको संक्रमण हुन नदिन बर्सेनि भ्याक्सिग्रिपको भ्याक्सिन दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
जुनसुकै रोगबाट भए पनि सिकिस्त बिरामी हुँदा अक्सिजनले फाइदा गर्छ भन्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूकोे विश्वासमा हिजोआज प्रश्नचिह्न लगाउन थालिएको छ । सामान्य अक्सिजन स्याचुरेसन भएका बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्दा हानि हुन सक्छ ।
अक्सिजन दिएर अक्सिजनको स्याचुरेसन (एसपीओ२) ९६ प्रतिशत भन्दा ज्यादा बढाउँदा हानि हुन्छ । पक्षाघात र हृदयाघातमा ९३ प्रतिशतभन्दा बढी अक्सिजन स्याचुरेस भएकालाई अक्सिजनले हानि पुर्‍याउन सक्छ । ९०–९२ प्रतिशतसम्म अक्सिजन हुनेहरूलाई भने अक्सिजन प्रयोग गरे हुन्छ ।
सीओपीडीबाट बिरामीहरूलाई लगातार ८८ प्रतिशत र योभन्दा कम अक्सिजन स्याचुरेसन अथवा रगतको अक्सिजनको प्रेसर ५५ मिलिमिटर मर्करी र कार्बनडाइअक्साइड ५० मिलिमिटर मर्करी भएमा लामो अवधिसम्म घरमा अक्सिजन प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही परिश्रम गर्दा अथवा रातीको अक्सिजन स्याचुरेसन केही मात्रामा कम हुँदा अक्सिजनको आवश्यकता पर्दैन । सीओपीडीका बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिँदा कार्बनडाइअक्साइड बढ्छ, जो फोक्सोका लागि राम्रो हुँदैन । अक्सिजन ५५–५९ मिलिमिटर मर्करी भएर अन्य रोग, जस्तै : पल्मोनरी हाइपरटेन्सन, हार्ट फेलर पोलिसाइथेमिया हुनेहरूलाई पनि अक्सिजन दिन सकिन्छ ।
हिजोआज पल्स अक्सिमिटरबाट सजिलैसँग अक्सिजनको स्याचुरेसन थाहा पाउन सकिन्छ । कार्बनडाइअक्साइडलाई पनि मोनिटर गर्न सकिन्छ, क्याप्टोग्राफीबाट ।
पहिले मास्कभित्र हावा पस्ने प्वाललाई ठूलो–सानो पारेर अक्सिजनको २४ प्रतिशत, २८ प्रतिशत, ३२ प्रतिशत र ३६ प्रतिशत निर्धारण गरिन्थ्यो । हिजोआज मास्कबाट अक्सिजन आउने विशेष किसिमको नलीलाई कलर कोड गरेर अक्सिजनको प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ ।
सीओपीडीबाट पीडित बिरामीहरूले आफूलाई उपचार गर्ने चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न अवस्थामा विभिन्न किसिमका औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सास फेर्न सजिलो पार्न औषधिहरूलाई शिराद्वारा, खाएर र सुँघेर प्रयोग गरिन्छन् । औषधि सुँघ्ने सही तरिका चिकित्सकसँग सिक्नुपर्छ ।
सास फेर्न बल नपुग्नेहरूलाई मेसिनद्वारा (सी–क्याप) सास फेर्न सजिलो हुन्छ । सास फेर्न नसक्ने सिकिस्त बिरामीहरूलाई भने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । नाकमा राखिएको नलीद्वारा र विभिन्न प्रतिशत अक्सिजन निकाल्न सकिने भेन्टी मास्कद्वारा सीओपीडीका बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिन मिल्छ । हामीले सास फेर्ने हावामा २१ प्रतिशत अक्सिजन हुन्छ । प्रत्येक लिटर अक्सिजनले ४ प्रतिशत अक्सिजन दिन सक्छ । बिरामीलाई चाहिने अक्सिजनको प्रतिशत भेन्टी मास्कद्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नाकबाट नलीद्वारा एक लिटर अक्सिजन दिँदा २४ प्रतिशत, दुई लिटर दिँदा २८ प्रतिशत, तीन लिटर दिँदा ३२ प्रतिशत र चार लिटर अक्सिजन दिँदा ३६ प्रतिशत अक्सिजन दिन सकिन्छ ।
हावाबाट मेसिनले अक्सिजन निकाल्न सकिन्छ । बिजुलीबाट चल्ने यो अक्सिजन बनाउने मेसिन केही महँगो भए तापनि सीओपीडीका बिरामीहरूलाई लामो अवधिसम्म अक्सिजन दिन सम्भव हुन्छ । २४ घण्टामा १५ वटासम्म अक्सिजन दिँदा बिरामीहरूलाई फाइदा हुन्छ । १५ घन्टाभन्दा ज्यादा अक्सिजन नचाहिने कुरामा विशेषज्ञहरूले विश्वास गरेको पाइन्छ ।
सन् २०१९ सम्ममा संसारको जनसंख्या ७.७ बिलियन पुगेको छ । यही अनुपातमा सीओपीडीका बिरामीहरू पनि बढेका छन् । ५.५ बिलियन वर्ष अगाडि पृथ्वीमा अक्सिजन थिएन । ४०० मिलियन वर्ष अगाडि मात्र यो पृथ्वीले अक्सिजन पाएको इतिहास छ । सन् १७७४ मा फ्रान्सका प्रिस्टले र लाभाइसायरले सर्वप्रथम अक्सिजन बनाउन सकेका थिए । मानिसहरूका लागि अक्सिजन अतिआवश्यक वस्तु हो । अक्सिजनलाई सही तरिकाले सीओपीडीमा प्रयोग गर्दा जीवन अवधि लम्बिन सक्छ ।
सीओपीडीमा औषधिहरूको प्रयोग
सीओपीडीमा जीवाणुद्वारा संक्रमण हुँदा एण्टिबायोटिक्स प्रयोग गर्ने सल्लाह दिइन्छ । खकार जाँचेर व्याक्टेरिया पत्ता लगाउन सकिन्छ । फाइदा गर्ने औषधि पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
रोगग्रस्त फोक्सोको भागलाई शल्यक्रियाद्वारा अथवा ब्रंकोस्कोपबाट फ्याँक्न सकिन्छ रोगले अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएको फोक्सोलाई उपचार गरेर स्वस्थ बनाउन सम्भव हुँदैन । हिजोआज काम नलाग्ने फोक्सोलाई फ्याँकेर फोक्सोको प्रत्यारोपण गर्न शल्य चिकित्सकहरू सक्षम भएका छन् । फोक्सोको प्रत्यारोपण भविष्यमा नेपालका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सम्भव छ । सरकारले समयमा नै शल्य चिकित्सक र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिम गराउनुपर्छ । सीओपीडी जस्तो दीर्घरोगको रोकथाम र उपचारमा राज्यको सहयोग अतिआवश्यक छ । हाल नेपालमा उपलब्ध नभएका प्रविधिहरू भित्र्याउने दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ ।